हिजो भारतीय सैनिकले लिगलिगे राजाको श्रीपेच लगाए, आज प्रम ओलीले ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच सार्वजनिक गर्ने – MySansar
हिजो भारतीय सैनिकले लिगलिगे राजाको श्रीपेच लगाए, आज प्रम ओलीले ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच सार्वजनिक गर्ने
Posted on October 15, 2018 by Salokya
लिगलिगकोटमा अझै दौडेर राजा चुन्ने प्रथा कायमै रहेको भए हिजोदेखि एक भारतीय सैनिक राजा हुन्थे। यशोब्रम्ह शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले सन् १५५८ मा गोर्खा, लिगलिगकोटका घले राजवंशलाई समाप्त गरेसँगै दौडेर राजा चुन्ने प्रथा बन्द भयो। केही वर्षदेखि पर्यटन प्रवर्द्धन र रमाइलोको लागि मात्र दौडेर राजा चुनिन्छ। हिजो भएको यो दौडमा भारतीय सेनामा कार्यरत पर्वतका अनिश थापा मगर नवौं लिगलिगे राजा भए। पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले उनलाई चाँदीको श्रीपेच लगाइदिए। तर असली श्रीपेच भने आज प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गर्दैछन्।
ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र घोषणापछि नारायणहिटी छाड्नुअघि श्रीपेच र राजदण्ड आफैले लैजान खोजेका थिए। तर तत्कालीन सरकारले उनलाई त्यसो गर्ने अनुमति दिएन।
ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन सँगै नारायणहिटी दरबारमा संग्रहालय भइसकेको छ। तर शाहवंशले लगाउँदै आएको श्रीपेच र राजदण्ड भने अहिलेसम्म त्यहाँ सार्वजनिक गरिएको थिएन।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरुको प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार नारायणहिटीको सुर्खेत र रुपन्देही कक्षमा श्रीपेच राखिनेछ। श्रीपेच र राजदण्डसँगै तत्कालीन रानीको मुकुट (टायरा), तरवार, राजदण्ड, झारी, चमर लगायत सामग्री पनि प्रदर्शनीमा ल्याइँदैछ। श्रीपेचलाई सुरक्षाका सात वटा तहमा राखिने भएको छ। २०६८/६९ को बजेट कार्यक्रममा नै श्रीपेचलाई प्रदर्शनीमा राख्ने घोषणा गरे पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै हालसम्म प्रदर्शनमा राख्न सकिएको थिएन । केही वर्षअघि नै बुलेट प्रुफ सिसासहितको सोकेस तयार गरिसकिएको थियो । त्यसमा प्रयोग गरिएको सिसाको परीक्षण गर्ने क्रममा नेपाली सेनाको कालीबहादुर गणले १६ फिट टाढाबाट गोली हान्दा प्वाल नपरी सामान्य चर्किएको मात्र थियो । हुमाउ चराको प्वाँख (कल्की) कुहिन सक्ने भएको २०७१ साल चैत २० गते ‘ट्रिटमेन्ट’ गरिएको थियो । स्वर्गको चरा मानिने हुमाउ चरा विश्वबाट प्रायः लोप भइसकेको बताइन्छ । श्रीपेचमा सो चराको टाउकोसहित राख्ने गरिन्छ ।
ज्ञानेन्द्रले नेपालका २०६५ साल जेठ २९ नारायणहिटी दरबार छाडेर जानुअघि दरबारमै राष्ट्रको नाममा गरेको अन्तिम सम्बोधनमा श्रीपेच दुई पटक उच्चारण गरेका थिए। उनले सम्बोधनका क्रममा ‘परम्परागत रूपमा शाहवंशीय राजाहरूबाट प्रयोग भई शाहवंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकालपर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्नेगरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहनेगरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु’ भनेका थिए। यसको १० वर्षपछि यी सामान प्रदर्शनीमा राख्न लागिएको हो।
यस्तो थियो ज्ञानेन्द्रको अन्तिम सम्बोधन
8 thoughts on “हिजो भारतीय सैनिकले लिगलिगे राजाको श्रीपेच लगाए, आज प्रम ओलीले ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच सार्वजनिक गर्ने”
रा .प्रा .पा बिनाको राजा आउनु पर्यो वा सेना सहित को राजा
अलि बुझेर सोचेर विदेशको सेनामा भर्ति भयका प्रति आफ्नो सोच बनाउन सल्लाह दिन्छु/ ब्रितिशको भारत र आजको नेपाल मिच्ने पेल्ने भारतको सेनामा भर्ति हुन् गोर्खाली समुदायको नेपालीहरु आफ्नो इछ्याले गयको होईन / ब्रितिशको भारतको सेनामा गोर्खालीको बहादुरी र रास्ट्र प्रतिको इमान्दारित देखेर नेपाल सिट लडाई जितेर पनि भारतको ५५० राज्यको सेनालाई जसरिनै दवाई राख्न सकिंदैन भनेर बुझेरै ब्रिटिशले नेपालको राजा सिट सुगौली सन्धि गर्दा गोर्खाली समुदायको नेपालीलाई ब्रितिशको सेनामा भर्ति गर्न दिनु पर्ने सर्त राखेको थियो/ ब्रिटिश सिट लडाई हारेको कारण तत्कालिन नेपालको राजा सिट त्यो सर्त मान्नुको बिकल्प पनि थियन/ त् राजाले नै गोर्खाली समुदायको नेपालीलाई ब्रितिउशको सेनामा भर्ति गर्ने सन्धि गरेको थियो/ त्यो सन्धि अझ सम्म पनि खारेज गरियको छैन/
सन् २०४७मा ब्रिटिस भारत बात फर्के/ २००७ सालमा भारतमा हुर्के जन्मेका र भारतले पत्यायको र भारतले जे भन्यो त्यो दिने मान्नेहरु नेपालको शासक बने/ तिनीहरुले २००८ सालमा गोर्खाली समुदायको नेपालीहरुलाई भारतको सेनामा भर्ति हुन् दिने सन्धि गरे/
त् भन्नुस ब्रिटिश र भारतको सेनामा भर्ति हुन् जानेहरु कसरि बिदेशीको भरौटे र गुलाम भयो?
ब्रिटिश पछिको भारतले पनि नेपाली गोर्खालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ति गराउने दुई कारण छन्/
नेपाली बिदेशमा सेना होस् बा कुनै अरु रोजगारीमा जान बाध्य हुनु नेपालको शासकहरु नेपालीलाई नेपालमा रॉजगारि र अवशर दिन असमर्थ भयकोले हो/ तेसैले बिदेश गयका नेपालीहरु मात्र “बिचरा” हुन् चाहे तिनीहरु अरवको मरुभूमिमा होस् बा अमेरिका/
मित्र नेपालको २००७ पछिको शासकहरुले नेपाललाई “निकम्मा शासक भयको देसमा नागरिक बेकम्मा हुन्छ” भन्ने कथनको उदाहरणनै बनायको छ/ ई शासक बनेका नेताहरुको कुनै पनि कमाउन्दैनन, तर बिदेशमा बसेकाले रगत बगाय जस्तै पसिना बगायर नेपाल पठायको रकममा राजसी जीवन बिताउञ्छन/
साँचो कुरा पच्दैन । पैसाका लागि देशको सेना नबनी भारतको सैनिक बन्नेलाई भाडाको सैनिक नै भन्ने हो । सिके राउतभन्दा कम होइन पैसाका लागि देश नभनी विदेशीको गुलाम बन्नु।
खाडीमा पसिना बगाउने नेपालीहरु बरु महान् हुन् । उनीहरु दुःखले कमाएको पैसा नेपालमा पठाई जीविका चलाइरहेका छन् । युरोप अमेरिकामा बसेर देशको बदनामी गर्दै भाँडा माझ्नेले जस्तो द्रोह गरेका छैनन् ।
मित्र ले अरुले गरेको प्रगति को सम्मान गर्न नसकी डाह गर्ने, दिनभरी चियापसल मा फटाह गफ लडाऊदै बस्ने भ्रस्ट नेताका झोले कार्यकर्ता परे जस्तो छ तिम्रा लागि सिके राउत जस्ता देश द्रोही महान होला हाम्रा लागि हरेक पौरखी हात महान छ चाहे ति भारतीय सेनाका दाजु भाई होस् या खाडीमा काम गर्ने साधारण नेपाली
ठीकै त हो नि, अर्काको देशका लागि युद्ध लड्ने सैनिकहरु भाडाका सैनिक नभए के त ?
शान्तिसेनामा त नेपाली सेनाबाट जाने हुन् । उनीहरु शान्ति रक्षाका लागि नेपाली सेना भएर जाने हुन् ।
अमेरिका अस्ट्रेलियामा लुकेर भाँडा माझ्नेहरु भाँडा मझुवा हुन् । नेपालको बदनाम गरी शरणार्थी बन्नेहरु देशको बदनाम गर्ने शरणार्थी हुन् ।
यो सोचेरै लेखिएको हो मित्र
@rabin भारतीय सेनामा काम गर्ने जति भाडा का सेना हुन् भने शान्ति सेना मा जाने हरु चाही के हुन् ? अमेरिका,अस्ट्रेलिया, युरोपमा लुकेर भाडा माझी बस्ने हरु चाही के हुन् ?? मित्र अलि सोचेर लेखने गरौ
bharatiya bhaadaka sainik bhannu parla magar lai
प्रत्येक बर्ष हुने लिगलिगे घले दौडमा द्रब्य शाहले जितेपछि गैरकानुनी सत्ता कब्जा बाट शुरु भएको नेपालको शाह सासन रण बहादुर शाह उर्फ निर्गुणानन्द स्वामीको पालामा श॔कामा पर्यो । के उनका सांच्चैनै आफ्ना सन्तान थिए त? ग्याने, अझ झन् ब्यभिचारी पारसे सांच्चै नै उनका दरसन्तान हुन् त? के ति कुपुत्र नेपालीका राजा बन्न लायक छन् त?